Slovenia oo 1-0 Kaga Badisay Algeria
Waddanka Slovenia ayaa maanta oo Axad ah hal gool kaga badiyey waddanka Algeria kulankii 2aad ee Qeybta C
Ciyaartoyga Robert Koren ayaa Slovenia u dhaliyey goolkii ay kaga badiyeen waddanka Algeria. Slovenia waxay goolkaaas dhalisay daqiiqadii 79aad. Algeria ayaa la islahaa guul bay ka keeni doonaan kulankoodii maanta maaddaama Slovenia ay tahay waddamada ugu awoodda yar qaramada kasoo qeyb galay Ciyaaraha Adduunka sanadkan.
Slovenia waa markii ugu horeysay ee ay ciyaaraha adduunka kasoo qeyb gasho, waana waddanka ugu yar waddama ciyaaraha kasoo qeyb galay marka la eego xaga tirada dadka. Algeria 10 ciyaartoy ayey ciyaarta ku dhameystay ka dib markii daqiiqadii 72aad warqadda cas la siiyey Ghezzal oo xagga hore uga ciyaarayey Algeria.
Slovenia ayaa hadda 3 daqiiqadood qeybtooda C ku hogaaminaysa, maaddaama ay England iyo USA oo iyaga la qeyb ahi ay shalay bar-baro galeen. Algeria oo aan wax dhibco ah lahayn ayaa howl adagi hortaalaa marka ay la kulanto qaramada England iyo Maraykanka.